आईक्लाउड | प्रयोगकर्ता र पासवर्ड त्रुटि फिक्स गर्नुहोस् आईफोन समाचार
अलेजेन्ड्रो क्याब्रेरा | | iCloud, ट्यूटोरियल र म्यानुअल
यो पुरानो बग हो, तर हामीले त्यसलाई हेरेर राख्यौं, iOS the मा अन्तिम अपडेट पछि पनि। कहिलेकाँही एक आईफोन एक लुपमा जान्छ जहाँ यो लगातार तपाइँको डेटा माग्छ आईक्लाउड पहुँच, प्रयोगकर्ता र पासवर्ड। जब तपाईं आफ्नो एप्पल आईडी र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, त्रुटिले तपाईंलाई फेरि बारम्बार सोध्छन् (र फेरि, र फेरि) प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड, धेरै कष्टप्रद, सही?
आईक्लाउड इनपुट लूपमा अड्किएको आईफोन अत्यन्त निराशाजनक हुन सक्छ। भाग्यवस, सहयोग हात मा छ। यस लेखमा हामीसँग आईक्लाउड इनपुट लूपको लागि पाँच फरक समाधानहरू छन्.
1 बन्द गर्न स्लाइड
2 विच्छेद गर्नुहोस्
3 ICloud ले काम गरीरहेको छ भनि प्रमाणित गर्नुहोस्
4 तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्
5 ब्याकअप र आईफोन पुनर्स्थापना
बन्द गर्न स्लाइड
आईक्लाउड पत्यारपत्र प्रविष्टि गर्दा त्रुटिaको कारणले हुन सक्छ दोषपूर्ण वाइफाइ जडान , र यसलाई सच्याउनको लागि सब भन्दा सजिलो तरीका हो आईफोन बन्द गर्नुहोस् र एकछिन पछि फेरी यसको चालु गर्नुहोस्। यसले केही मिनेट मात्र लिन्छ, र यदि समस्या समाधान भयो भने, यसले तपाईंलाई समस्याहरूको अन्य धेरै समाधानहरू बचत गर्दछ जुन तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् तपाईको आईफोनलाई बन्द गर्न र यसलाई पुन: खोल्नुहोस्:
बटन होल्ड गर्नुहोस् लक / वेक (आईफोनको शीर्षमा, वा दायाँ पट्टि यदि यो अधिक आधुनिक मोडेल हो) करीव करीव पाँच सेकेन्डको लागि विकल्प बन्द नभएसम्म देखा पर्दछ।
पावर अफ आइकन स्वाइप गर्नुहोस् दायाँ तिर।
पर्दा पूर्ण कालो जानको लागि करीव seconds० सेकेन्ड पर्खनुहोस्।
फोनलाई फेरि खोल्नको लागि लक / वेक बटन थिच्नुहोस्।
जब यो पहिले देखि नै छ, यसले iCloud सुरु हुनुभन्दा पहिले केहि लिन सक्दछ। तपाईको एप्पल आईडी र पासवर्ड अनुरोध गर्न सकिन्छ, एक पटक प्रविष्ट भएपछि तपाईंले फेरि अनुरोध गर्नु हुँदैन।
यदि तपाईंको आईफोन रीसेटिंग समस्या हल गर्दैन भने, प्रयास गर्नुहोस् आईक्लाउडबाट बाहिर निस्कनुहोस् र फेरि साइन इन गर्नुहोस्। यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
जानुहोस् सेटिंग्स> आईक्लाउड.
तल स्क्रोल गर्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् बाहिर निस्कौं.
ट्याप साइन आउट।
थिच्नुहोस् आईफोनबाट हटाउनुहोस्.
अब ट्याप गर्नुहोस् Iniciar sesión.
यो आईक्लाउड रिसेटले समस्यामा समस्या समाधान गर्न सक्छ।
ICloud ले काम गरीरहेको छ भनि प्रमाणित गर्नुहोस्
जारी गर्नु अघि, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि यो जाँच गर्नुहोस् आईक्लाउड राम्रोसँग काम गर्दछ.
तपाईं जानु पर्छ https://www.apple.com/support/systemstatus/ तपाईंको म्याक वा आईफोनमा र ती सबै जाँच गर्नुहोस् सेवाहरु हरियो छन्। यदि एप्पलको सर्भरमा आईक्लाउडसँग समस्या छ भने, केहि घण्टामा एप्पलले यसलाई ठीक गर्ने प्रतीक्षा गर्नु उत्तम हुन्छ।
तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्
यदि माथिका कुनै पनि चरणहरू सफल भएनन्, र एप्पल प्रणाली स्थिति पहिले नै राम्रोसँग काम गर्नको लागि प्रमाणित भइसकेको छ भने, अर्को चरण हो तपाईंको एप्पल आईडी पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्। यो एक समस्या हो, तर समस्या प्राय: स्थिर हुन्छ। पासवर्ड परिवर्तन गर्न तपाईको म्याक (वा विन्डोज पीसी) बाट व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ।
सफारी वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र जानुहोस् https://appleid.apple.com
मा क्लिक गर्नुहोस् पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्.
तपाईंको एप्पल आईडी प्रविष्ट गर्नुहोस् र अर्को क्लिक गर्नुहोस्।
छनौट गर्नुहोस् ईमेल प्रमाणिकरण वा सुरक्षा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् र अर्को क्लिक गर्नुहोस्।
मा क्लिक गर्नुहोस् पासवर्ड पुनःसेट गर्नुहोस्.
प्रविष्ट गर्नुहोस् नयाँ पासवर्ड पासवर्ड क्षेत्र मा र त्यसपछि पासवर्ड पुष्टि गर्नुहोस्।
अहिले तपाईंको आईफोनमा नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् सोध्दा यो आईफोनले स्वीकार्नु पर्छ र समस्या समाधान गर्नु पर्छ।
ब्याकअप र आईफोन पुनर्स्थापना
यदि आईफोनले आईक्लाउड पासवर्ड माग्दै जान्छ, तपाईले पहिले नै आईफोन बन्द र खोल्ने प्रयास गरिसक्नुभयो, तपाईको आईक्लाउड पासवर्ड र अन्य विकल्पहरू माथि परिवर्तन गरिसकेका छौं, तब अन्तिम चरण हो। ब्याकअप र आफ्नो आईफोन पुनर्स्थापना.
तपाईंले एक बनाउन आवश्यक छ कम्प्युटरमा तपाईंको आईफोन ब्याकअप गर्नुहोस् किनकि यसले आईक्लाउडमा ब्याकअप गर्न सक्षम हुनेछैन।
तपाईको आईफोन म्याकमा जोड्नुहोस् USB केबल प्रयोग गर्दै।
उपकरणहरू क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको आईफोन चयन गर्नुहोस्।
सारांश चयन गर्नुहोस्।
का लागि चयन गर्नुहोस् कम्प्युटरमा जगेडा गर्नुहोस्.
मा क्लिक गर्नुहोस् ब्याक अप अब
ब्याकअप प्रक्रिया पूरा हुनका लागि कुर्नुहोस् (तपाईंले आईट्यून्सको माथि निलो प्रगति पट्टी देख्नुहुनेछ)।
जब यो समाप्त हुन्छ तपाईं आफ्नो आईफोनको बहाली प्रक्रिया सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको आईफोन म्याकमा जोडिएको छ।
मा क्लिक गर्नुहोस् सेटिंग्स> आईफोन> आईक्लाउड.
मेरो आईफोन खोज्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
मेरो आईफोन फेला पार्नुहोस् बन्द गर्नुहोस्e.
तपाईंको एप्पल आईडी पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र निष्क्रिय गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको म्याकमा आईट्यून्समा फर्कनुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस्.
पुनर्स्थापना प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस् र पुनर्स्थापना प्रक्रिया भन्दा पहिले तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको ब्याकअप प्रयोग गर्नुहोस्। एप्पलबाट आईओएसको नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्, र ब्याकअप प्रयोग गरेर तपाईंको आईफोन पुन: भण्डारण गर्नुहोस्।
यी मध्ये एउटा चरणले तपाईले समस्या समाधान गर्नुपर्दछ जुन तपाईको एप्पल आईडी र पासवर्ड तपाईको उपकरणमा निरन्तर अनुरोध गरिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » कसरी आईफोन फिक्स गर्ने जुन तपाईको आईक्लाउड प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड माग्दै छ
डेभिड सी ++ भन्यो
नमस्ते, मलाई मात्र यो हुन्छ: हे, मैले पासवर्ड परिवर्तन गरें र मेरा सबै उपकरणहरू रिसेट गरें, तर यो आईफोन,, आईप्याड एयर र म्याकबुक प्रोमा देखा पर्नेछ। अझै पक्का छैन।
डेभिड सी ++ लाई जवाफ दिनुहोस्
अलेजेन्ड्रो क्याब्रेरा भन्यो
नमस्ते डेभिड, के तपाईंले possible सम्भावित समाधानहरू बनाउनुभयो?
एलेजेन्ड्रो क्याब्रेलाई जवाफ दिनुहोस्
आईटीको साथ मेरा पाँचौं जेनेरेशन आईपोडको साथ आउँछ, म समस्या समाधान नभएको खण्डमा भेट्न नसकिने सत्र बन्द गर्ने चरणको साथ प्रयास गर्नेछु।
एमीले मलाई एप्पस्टोरको साथ हुन्छ म डाउनलोड गर्न वा अपडेट गर्न सक्दिन मलाई के हुन्छ थाहा छैन म जेलर्याक गुमाउन चाहन्न।
एल्मरलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मैले सबै चरणहरू गरे र मसँग अझै समान समस्याहरू छन्, मसँग अर्को उपकरण छ उही खातामा र यसले राम्ररी काम गर्दछ, म पीसीबाट भित्र जान्छु र यसले मलाई आइक्लोउड खातामा प्रवेश गर्न दिन्छ र म अरू केहि सोचिनँ, कसैलाई समाधान थाहा छ
कुनै पनि विधिले मेरो लागि काम गरेन। यो नयाँ मोबाईल हो र यसले मलाई ब्याकअप गर्न दिदैन किनकि यो कन्फिगर गरिएको छैन (जब मैले यसमा मेरो अघिल्लो आईफोन पुनःस्थापना गरें)। यसले मलाई स्वागत सन्देश दिन्छ, म यसलाई अनलक गर्छु र यो सिधै एप्पल आईडी स्क्रिनमा जान्छ, जहाँ यसले मलाई समस्या दिन्छ।
अहिले मेरो पहिलो आईफोन भएको दिनमा म पूर्ण रूपमा दु: खी छु
यद्यपि यो नेटवर्कमा जडित छैन, यसले लगातार मलाई आईक्लउडसँग जडान हुन अनुरोध गर्दछ। म चुपचाप पढ्न पनि सक्दिन।